Wonke umuntu uyazi ukuthi nesweli - kuyazuzisa empilweni yomuntu zemifino. Nokho, cishe akekho uyaqaphela ukuthi ukwenza umuthi ingasetshenziswa kanye husk. Futhi lena imithi ezinkulu nje siphoselwe kudoti!
Garlic - kuyinto herbaceous isitshalo zisetshenziswa omndeni bohlobo Onion Amaryllidaceae. Kuyakuba khona impande lombala isitshalo amhlophe, fibrous. Bulb eziyinkimbinkimbi, isithelo siqukethe bulblets, izingane. Isibalo sabo izicucu 50. Husks, izithelo enamathela, futhi Sinesithakazelo esikhulu njenge-ejenti ekwelapheni. Ihamba izitshalo ewumngcingo, eside, ukuma lanceolate-side. Zingaba uqonde futhi sawo. Vegetable sifanamsindvo ukuphakama ifinyelela 150 cm inflorescence -. Lokhu isambulela eyindilinga, esakhiwa asterisk encane Lilac - imibala. Izithelo - capsule.
Ikhaya a zemifino Asia Ephakathi. Kuze kube manje, it is kutshalwa emazweni amaningi njengoba ukudla nezitshalo okwelapha. China lifaka indawo 1st ku ukutshalwa simila.
Husks kusukela garlic: ayelapha
Ukuze umuthi we isithakazelo esikhulu quercetin, okuyinto ingxenye husk. Ubiza bioflavonoids. Linikeza quercetin husk izakhiwo zokwelapha, ngoba ingenye uhlobo Vitamin P, kubaluleke kakhulu umzimba. Garlic ku quercetin lokuhlushwa yesibili nokunye okufana nokolweni kuphela. Lokhu kwaziswa kunikeza sezindawo ahlanzayo husks, okuyizinto zenani elikhulu kakhulu ukuze kulondolozwe impilo yabantu.
Amandla okwelapha garlic peels abagcini lapho. Esinye isici okuwusizo Ukwakheka ubhekwa pectin, okuyinto enyameni akuyona. I khoba ize iyofinyelela embewini, yena ine lokuhlushwa omkhulu. Lokhu kwaziswa ithuthukisa nakakhulu yokuhlanza izindawo, ngaphezu kwalokho, kunomthelela ekulweni neoplasms ahlukahlukene.
Ngenxa yalezi izingxenye ezimbili, futhi kufanele esetshenziselwa ukwenza umuthi garlic husk.
Ukusetshenziswa husk garlic
I husk garlic, izakhiwo ewusizo echazwe esihlokweni ngenhla abelwa abantu abahlala ezindaweni nge imvelo ezimbi. Kuyadingeka ukuba asuse ubuthi, nosawoti of izinsimbi ezisindayo, compounds enemisebe futhi radicals khulula kusuka emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, husk isetshenziselwa ukuqeda cholesterol, uqinise inhliziyo, yezifo eziningi emathunjini ipheshana, isifo sikashukela kanye izimila zonke izinhlobo nemvelo. Ukwakhiwa kwayo emzimbeni nethonya ekuvuseleleni, okuyinto kakhulu kuthuthukisa impilo jikelele, ukubukeka, ukunika amandla nobungqabavu. Futhi eziyigugu antifungal, analgesic kanye immunomodulating izakhiwo umkhiqizo.
Ukwelashwa husk garlic siyasebenza kakhulu ngesikhathi nokuqubuka ezithile zonyaka-SARS kanye Umkhuhlane. Uma umuntu egula kakade, bese umkhiqizo kuyothuthuka esimweni salo, kanye ukusheshisa yokutakula ngenxa immunoukreplyayuschim yayo kanye izimfanelo namagciwane.
Husks kusukela garlic ewusizo kuka omunye? Ngempumelelo ukuhlanzwa isinyathelo, Kojima has wokukhala kahle zokuhamba izitsha futhi inikeza ithuba lokubuyisa ukugeleza kwegazi enempilo, ngaleyo ndlela uqede ngisho zingcwecwe cholesterol. Futhi-ke kusiza ukuvimbela ukuthuthukiswa isifo senhliziyo, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, thrombosis nonhlangothi. Ngakho-ke, izidakamizwa aphume it is ikakhulukazi Kunconywa ukuba silondoloze impilo yabantu abadala.
Ukuvuvukala urinary kanye wamathumbu kungenziwa ngokuphelele iqedwe ngokusebenzisa ikhasi - ke Liyindawo ezibalulekile lapho isifo ayikwazi ukuphatha izidakamizwa imithi ehlukile.
Kufanele kuphawulwe ukuthi, ekuthuthukiseni izinqubo umzimba emzimbeni, garlic husk ithole isicelo ukuze ususe Ukuwohloka noma ukukhuluphala. Lesi sici lwaziswa ngokukhethekile izazi ngoba kusiza babhekane nezinkinga main amaklayenti abo.
I husk garlic kwezokwelapha yelula izakhiwo ewusizo hhayi kuphela lokhu. anti-ukuguga wayo izakhiwo zichazwe ikhono ukubonisa futhi ubopha ubuthi, okuyinto ezibhekwa izimbangela ukushwabana kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi. Endabeni ukusetshenziswa husk ngcono isimo izinzipho, izinwele kanye isikhumba ubuyela ukubonakala.
Ukuhlanzwa izakhiwo ayo anamandla, kanye immunomodulatory anticancer umphumela kubonakala husk. ezizivelelayo Mahhala, okuyizinto imbangela eyinhloko neoplasms abulalayo, ziyasuswa ngokuphelele emzimbeni ngaphansi kwethonya izidakamizwa okulungiselelwe ngesisekelo umkhiqizo.
I husk garlic wendabuko imithi esetshenziswa kakhulu ngenkuthalo. Kodwa bonke ngokufana it has Izimo. Uma ungenawo unake, kungabangela ukulimala zempilo ezingathi sína. husks Garlic kungenzeka ingasetshenziswa uma kukhona izifo ezifana nezimo:
izifo Okwamanje acute emathunjini;
yobudala engaphansi kwengu-12;
Isifo sikashukela iphathwa husks njalo ngemuva kokuxoxisana udokotela, ngoba izidakamizwa unamandla, futhi kudingeka umthamo wakhe ngqo. Ngaphezu kwalokho, khumbula ukuthi e-ukungabi khona Izimo ngoba usuku ivolumu imithi akufanele bube ngaphezu kuka-1 litre. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi umuthi ungangena uphuze umkhuhlane. isiphuzo Warm noma kushisa akuvunyelwe nhlobo ukusebenzisa.
I husk garlic wendabuko imithi esetshenziswa kakhulu ngenkuthalo. Ukuze ukwelashwa, kudingeka alungiselele kahle imithi kuwo. idatha Recipe kusho lukhulu, futhi konke okudingayo ukuxazulula zonke izinhlobo zezinkinga empilweni yomuntu.
Imithi izitsha inhliziyo
Ukuze kuqiniswe inhliziyo nemithambo yegazi uhlanzekile ngenkuthalo wasebenzisa husk garlic wendabuko imithi. Ukuze wenze lokhu, wageza kahle ikhasi ugaye futhi uthele 3 wezipuni ilitha lamanzi. Khona-ke ingxube ubiliselwe okugeza amanzi, ukugwema ukubila phakathi nemizuzu engu-15. Ngemva 3 chasa izidakamizwa ukumnika zokuhlunga. Cold uphuze decoction kathathu ngosuku isigamu ingilazi emva kokudla. Isikhathi salesi ukwelashwa - ezinsukwini ezingu-30. Inkambo kungase kuphinde kushiwo abanye emva kwezinsuku 50. Kuwo lo nyaka, bonke anconywe ezingeqi kwezingu-3 izifundo zale ndlela yokwelapha.
I ikhambi umkhuhlane nokukhwehlela
I husk garlic wendabuko imithi ibuye isetshenziswe ephefumula. Ukuze wenze lokhu, lutho owagcoba cast iron ukuthosa epanini shisisa husk. Uma iqala kancane ngibheme, ephefumula kungaba kwenziwe. Lokhu Intuthu uye ephulukisa izakhiwo. Inhalation kwamaminithi 7 akufanele kuhlale. Sneezing namehlo akhalayo phakathi naleyo nqubo kuyinsakavukela. Ngosuku isikhathi 1 kuphela, ungakwazi ukufeza inqubo. Le nqubo yokwelapha ithatha izinsuku ezingu-7.
Ukulungisa izidakamizwa, udinga 1 idlanzana ikhasi, uthele ingilazi yamanzi abilayo futhi bagcizelele isivalo 8 amahora. Ngemva zingaphazamisi ukwakheka siphelile sisetshenziswa ku ingilazi ngosuku izinsuku ezingu-10. Ukuphindwa kule nkambo kungenzeka kanye njalo ezinyangeni ezimbili. Izinguquko esimweni sempilo uzoqala ukuvela ngemva kwesonto yokwelapha ezinjalo.
Ukuze uthole imithi udinga ukuthatha husk enekhanda elikhulu garlic ke lisicole, mix it ngesikhumba kulamula ezinkulu, basonta e-grinder inyama. Khona-ke mass okuholela isuswe embizeni ingilazi futhi uthele 600 ml amanzi abandayo abilisiwe. Ngaphezu kwalokho, isitsha lokuvala ngesivalo, ukumnika izidakamizwa ishiywa efrijini 4 amahora. Khona-ke ukwakheka ukuthi bahlolwe bese esetshenziswa 50 ml sokuzila ukudla. Isikhathi salesi kwelashwa izinsuku ezingu-90. Kuthatha ikhefu phakathi izifundo okungenani inyanga.
Ngo yezifo ezihlukahlukene sina, phakathi lapho ukusebenza kwe-inhliziyo nezinso, ngesikhathi ukusetshenziswa ngenyanga ukumnika aqueous husk. Khona-ke kudingeka wenze ikhefu izinsuku ezingu 10, bese ukuphinda Yiqiniso.
isiphuzo Anempilo yalungiswa kanje: ikhasi nepepper spoon ukuthulula inkomishi yamanzi ashisayo isivalo sokunika amahora 6. Thatha baphuze isigamu inkomishi kabili ngosuku.
isixazululi nkinga yehadiwe nezinsiza-Chinese
Ukuze yokutakula, rejuvenation futhi asuse umzimba esetshenziswa ikhambi homeopathic abelaphi of China lasendulo. Kukholakala ukuthi imithi atholakele ezibhebheni zobumba e China. Kule nkathi kwamalebula uqobo has iminyaka 5,000. Recipe futhi sisasebenza nanamuhla.
4 izandla garlic ishq kusihlwa uthele ilitha lamanzi abilayo. Lokhu ukumnika ingasetshenziswa ngakusasa futhi kufanele uphuze kuyakuba khona izimbizana ezine ngosuku. Lokhu kumele kwenziwe kanje:
wobulili bubuhle izinsuku eziyishumi - ezinsukwini 20-30 lwenyanga;
wesilisa - izinombolo 10-20.
A ikhefu phakathi izifundo: 2 izinyanga.
Ukwelapha husk uzuzile, kubalulekile ukusebenzisa kuphela eliphezulu eluhlaza izinto. Kuvele okufana ekahle kubhekwa ukuba ngumnikazi garlic infield, njengoba endabeni kungaba 100% athile ukuthi kanye husks emzimbeni musa iwe hhayi nitrate kanye nezinye izingxube zamakhemikhali abakhona kule umquba.
Ukusetshenziswa nokusebenzisa Echinacea
Hydrogen peroxide: esetshenziswa abantu imithi. Izibuyekezo ukusetshenziswa i-hydrogen peroxide
Yiziphi ezisebenzayo kuzomele sifake wamafutha kuhle amalunga omzimba?
Imikhiqizo yenkampani "Victoria Wall"
Indawo yokudlela Elements: incazelo, imenyu, oxhumana nabo kanye nokubuyekeza
Wamafutha "Rescue": ukubuyekezwa kanye analogue
Periodontitis: Izimpawu kanye zokwelapha
I-Republic of Niger: sendawo, izinga lokuphila, ezikhangayo wezwe